502.4.1AR - Somali Student Transfers: State Enrollment Options Program - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
Series 502.4.1AR - Somali Student Transfers: State Enrollment Options Program
Adopted: December 1977
download SOMALI student transfers: state enrollment options program
1. Oggolaansho – Kormeeraha guud wuxuu u qoondeeyay maamulka inay oggolaadaan ama diidaan u wareejinta agaasimeyaasha waxbarashada hoose (ardayda dhigata fasallada k-5), waxbarashada dugsiga sare (ardayda dhigata fasallada 6-12) iyo waxbarashada gaarka ah (ee ardayda ku jirta xarunta barnaamijyada waxbarasho ee gaarka ah).
2. Shuruudaha –Waalidiinta, wakiilada ama ardayda qaangaarka ah ee 18 jirka ah ama ka weyn ee aan degganeyn Degmada 196 waxay dalban karaan diiwaangelinta ardayda ee Degmada 196 iyada oo loo marayo barnaamijka xulashada isqorista gobolka.
3. Hanaanka Codsiga
3.1 Si loo bilaabo dalab beddel, waalidka ama ilaaliyaha ardayga, ama ardayga qaangaarka ah, waa inay dhammaystiraan Nidaamka 502.4.1P, Barnaamijka Foomka Ikhtiyaariyada Diiwaangelinta Gobolka oo loo diro Kormeeraha Macluumaadka Ardayda, Dugsiga Madaxa Bannaan ee Degmada 196, 3455 153rd Street West, Rosemount, MN 55068. (Codsadeyaasha waxaa si xoogan loogu dhiirigelinayaa inay codsadaan dugsiga iyo / ama barnaamijka ay rabaan inay ka qayb galaan foomka dalabka. Haddii in ka badan hal la aqbali karo, codsaduhu waa inuu liis gareeyaa dugsiyada iyo / ama barnaamijyada sida uu ukala doorbidayo.)
3.2 Tirada ardayda aan deganeyn degmada ee loo aqbalay isqorista degmada waxaa lagu xadidi karaa tiro aan ka yareyn: 1) boqolkiiba hal wadarta isdiiwaangalinta heer kasta oo fasal ee degmada ah; ama 2) tirada deggeneyaasha deggen ee heerkaas fasalka ah ee ka diiwaangashan degmo dadka aan deganayn degmadada sida hoos timaad Barnaamijka Ikhtyaarada Isqorista. Haddii Guddiga Dugsiga ay xaddidaan diiwaangelinta qaabkan, waa inay qaadaan tallaabo sannadle ah, kahor Janaayo 1 ee sannad kasta.
3.3 Haddii degmadu hesho codsiyo ka badan furitaanka la heli karo ee heer fasal gaar ah, xulasho aan kala sooc lahayn waa in la qabtaa wixii ka dambeeya ugu dambaynta Janaayo 15 si loo go'aamiyo ardayda heli doonta kuraasta mudnaanta la siinayo walaalaha, codsadayaasha la xiriira qorshaha isdhexgalka iyo guusha la ansixiyay, iyo carruurta xubnaha shaqaalaha degmada.
3.4 Codsiyada ardayda loogu beddelayo heerarka fasal ee booska laga heli karo waxaa oggolaan doona ama diidi doona agaasimaha ku habboon ama qofka u xilsaaray iyadoo la adeegsanayo nidaamka soo socda:
3.4.1 Marka tirada codsadayaasha codsanaya dugsi gaar ah oo leh boos bannaan ay la mid tahay ama ka yar tahay tirada boosaska laga heli karo dugsigaas, dhammaan codsadayaasha waa la aqbali doonaa.
3.4.2 Marka tirada codsadayaasha codsanaya dugsi gaar ah ay ka badan yihiin tirada boosaska laga heli karo dugsigaas, codsadayaasha la aqbalayo waxaa lagu dooran doonaa xulasho nasiib ah
3.4.3 Codsadayaasha codsada iskuullada aan lahayn boos bannaan ama aan lagu dooranin saamiga lagu sheegay 3.4.2 ee kor ku xusan, waxaa la siin doonaa fursad ay ku codsadaan in loo beddelo dugsi bannaan oo bannaan. Codsiyada dadka bedelaan codsiga dugsi leh meel laga heli karo oo la aqbali doonaa ama la diido ku salaysan habka ku qeexan 3.4.1 iyo 3.4.2 kor ku xusan.
4. Muddada iyo Waqtiga – Ardayda ka soo gala degmada iyada oo loo marayo barnaamijka xulashada diiwaangelinta gobolka waa loo oggolaan doonaa inay ku sii jiraan degmada illaa fasalka 12; si kastaba ha noqotee, marka la beddelayo heerarka (yacni aasaasiga illaa dhexe ama dhexe ama sare) meelaynta waxaa lagu go'aamiyaa helitaanka booska.
Tixtraacyo: - Xeerka Minnesota 124D.03, Barnaamijka Ikhtiyaariyada Isqorista